Savaranonando 2005 31/12/2005
Tsy fandavana ny fanjakana tsara tantanana ve ny fisiana firaisamonin'ny olom-pirenena tsy mifampiresaka aminy ?
Feno 5 taona izao ny Sehatra Fanaraha-maso ny fiainam-bahoaka, na SeFaFi araka ny fanafohezan-teny ahafantarana azy bebe kokoa. Niforona tamin’ny volana febroary 2001 izy ka niana-namindra tamin’ny andro nitondran’Atoa Didier Ratsiraka, talohan’ny niatrehany, niaraka tamin’ny firenena manontolo, ilay krizy politika nahazo ny andrim-panja...
Tsy niova fa mbola misy foana ny famerana ny zo hivory sy hanao fihetsiketsehana
Vao tsy ela akory izay no nanambaran’ny Ben’ny tanànan’Antananarivo Renivohitra fa raha mbola eo amin’ny toerany foana izy dia tsy hisy mihitsy fihetsiketsehan’ny mpanohitra homeny lalana ka hatao eto amin’ny tanànany. Mifanindran-dalana amin’izany fanambarana izany tokoa ny fitsipahan’ny manampahefana hatrany hatrany ny fangatahana maro nataon’ny mpanohitra hanao fivoriana na fihetsiketsehana. Eo anoloan’izany toe-draharaha izany, izay mitovy tsy misy ivoasana a...
Fanakatonana sy fandrarana ny Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara
Nakatona tamin’ny 25 oktobra 2005 ny Fiangonana Protestanta Vaovao eto Madagasikara ao Antaninanandrano. Tsy misy azo kianina ny fepetra nanatanterahana izany satria ara-dalàna. Manome lalana ny Ministeran’ny Atitany handrara fivavahana iray amin’ny alalan’ny fanapahan-kevi-panjakana manko ny Lalàna manan-kery. Kanefa nampiditra fanontaniana maro ilay fanapahan-kevitra, satria tsapa fa tsy mifanentana ny fandikan-dalàna sy ny sazy ampiharina.
Sazy tsy mifanenta...
Ny firaisamonin'ny olompirenena : toetra sy ny andraikiny
Lasa lamaody ny firesahana ny firaisamonin’ny olom-pirenena1. Tsy azo antoka anefa fa mitovy ny fahatakaran’ny olona ny dikan’izany. Amin’ny alalan’ity fanambarana ity dia miezaka ny SeFaFi ny hanome ny hevitra fototra ahafahana mamantatra ny firaisamonin’ny olom-pirenena ary koa mampiavaka ireo asa sahaniny. Ny atao hoe firaisamonin’ny olom-pirenena
Tsy fivondronan’olona mitsitokotoko na fikambanana maneho hevitra mitovy ny firaisamonin’ny olom-pi...
Fanatanterahana asa ho an'ny vahoaka sy fisintahan'ny fanjakana amin'ny orinasa
Nanomboka tamin’ny faramparan’ny tafolo taona 80, taorian’ny firodanan’ny kaominisma, dia lasa filamatr’ireo izay mirona tanteraka amin’ny fanalalahana, firehan-kevitra mahazo laka maneran-tany, ny fisintahan’ny Fanjakana amin’ny orinasa.
Tsy nivaona tamin’izany i Madagasikara. Nanenjika ny fibodoan’ny vahiny ny toekarena malagasy ny tolom-bahoaka tamin’ny 1972, ary nitaky ny fifehezan’ny Malagasy ny fiainam-pirenena. Niseho tamin’ny alalan’ny fandraisan’ny Fanjak...
Fanontaniana ho an'ireo mpamatsy vola antsika
Isan’ny tanjona lehibe ho an’ny Firenena Mikambana, ao amin’ny firenena andalam-pandrosoana toa an’i Madagasikara ny miasa ho amin’ny famerenana ny fanjakana tan-dalàna sy ny fananganana fiarahamonina tsara tantana vokatry ny fanamafisana sy fiarovana ny zo eo amin’ny lafiny politika, toekarena, kolontsaina sy sosialy. Namaritra fomba fiasa toy izany i Frantsa araka izay nambaran’i Mitterand tamin’ny kabariny tany La Baule tamin’ny taona 1990, toy izany koa ny Vondron...
Fitsinjaram-pahefana sa fivangongoam-pahefana ?
Tamin’ny taona 2004, dia naneho ny ahiahiny matetika mikasika ny fivoaran’ny andrim-panjakana eto amintsika sy ny fampiharana ny politikan’ny fitsinjaram-pahefana ny SeFaFi. Nanamarika an’izany ny fanendren’ny Ben’ny tanàna ny tompon’andraikitry ny fokontany izay nofidin’ny olom-pirenena teo aloha, ny fampatoriana ny Faritany mizaka tena, na dia manana ny satany amin’ny Lalàm-panorenana aza izany rafitra izany, ary koa ny fametrahana ny Faritra amin’ny fepetra tsy man...
Demokrasia tsara tantana, itsinjaram-pahefana ary lahika : inona no fepetra amin'izany ?
Noho ny krizy tamin’ny 2002, dia namoaka boky voalohany mirakitra ny fanambarana nataony ny SeFaFi (Sehatra Fanaraha-maso ny Fiainam-pirenena), ka ny hoe : Fahalalahan’ny olom-pirenena : anatry ny fotoan-tsarotra no lohahevitra nibahana tamin’izany.
Hita tamin’ny taona 2003 fa niverina indray ny fomba fanao heverina ho efa lany andro, koa dia nifantohan’ny sain’n...
Ny mahalahika ny fanjakana
Tamin’ny fanambarana navoakany ny 12 aogositra 2001 mitondra ny lohateny hoe “ Mba hisian’ny fifidianana marina sy mangarahara ”, dia sampona telo no nomarihin’ny SeFaFi ho misakana ny fanehoana safidy malalaka : ny vola, ny foko amam-pirazanana, ny fivavahana. Mikasika ny fivavahana, ary iaraha-mahalala fa Filoha lefitry ny FJKM ny Filoha Ravalomanana tamin’izany fotoana izany, dia toy izao no nosoratan’ny SeFaFi : “ Miteraka olana mifandraika amin’izany ny famp...
Momba ny atao hoe fitsinjaram-pahefana marina (Fizarana 2°)
II. Ny fametrahana ny faritra
Taorian’ny famakafakana voalohany tamin’ny fametrahana ny kaominina, dia tsara hotohizana amin’ny firafitry ny faritra izay omen’ny fitondrana ankehitriny lanja ny fandalinana.
A - Fomba fametrahana ny faritra azo iadin-kevitra
Ny atao hoe faritra dia nampidirina ao amin’ny rafi-panjakana malagasy tamin’ny fiandohan’ny Repoblika Fahatelo. Ny Lalàmpanorenana, tamin’ny endriny voalohany tamin’ny 1992, dia tsy nilaza na ...
Momba ny atao hoe fitsinjaram-pahefana marina (Fizarana 1°)
I. Rafitra ifotony manjavozavo
Tsy misy fanjakana tsara tantana raha tsy misy fandraisana anjara, ary mitaky fitsinjaram-pahefana izany ; tsy misy ihany koa fampandrosoana raha tsy misy fitsinjaram-pahefana marina. Samy mahafantra ary milaza izany ny rehetra, kanefa tsy nahavita nametraka sampan-draharaha manakaiky ny vahoaka sy mampifanatona ny fahefana amin’izy ireo ny fanjakana nifandimby teto, na dia fototra iorenan’ny demokrasia aza izany.
Lafiny iray manan-danja amin'ny fitantanana ny volam-bahoaka ny fanaraha-maso ny tetibola miaraka amin'ny fandaniana ny lalàna itantanana ny volam-panjakana. Ny hampisy fahombiazana ny fisahanana an'izany raharaha izany dia tsy maintsy ampahafantarina ny besinimaro araka izay azo atao sy atao mangarahara araka izay azo atao izany. Iray amin'ireo zava-kendren'izao fanambarana izao dia hanazarana ny vahoaka amin'ny paik...
Ny fampiasana ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy (Fizarana 2°)
II - Ny tsy fanajana ny lalàna momba ny fitantanam-bola
Mety miseho amin’ny endrika samihafa izany tsy fanajana lalàna izany. Araka izay hita tamin’ny taona faramparany dia toy izao manaraka izao ireo tsy fanajana ny lalàna tsikaritra : fandaniana « ivelan’ny tetibola », izay mihoa-pampana ary tena manjavozavo ; fanomezana tombon-dahiny sy fanafoanana haba tsy mifanaraka amin’ny lalàna ; ary toe-javatra maro tsy ara-dalàna amin’ny fomba nisintahana tamin’ny o...
Ny fampiasana volam-panjakana araka ny tokony ho izy (Fizarana 1°)
Fandaniana ataon’ny Fanjakana ivelan’ny tetibola (fividianana fiaramanidina Force one ho an’ny filoha, fiara 4x4 ho an’ny solombavambahoaka sy ny zandarimaria, sns), tamby amin’ny asa atao izay mifanohitra amin’ny Lalampanorenana ho an’ireo Minisitra sy ireo talen’ny ministera izay mandika ny fepetra manan-kery momba ny hetra, fanamparam-pahefana amin’ny fitantanana ny JIRAMA sy ireo orinasam’panjakana hafa, volavolan-dalàna momba ny fisintahan’ny fanjakana ary momba ...